zvimwe zvimwe: Unix yekushandisa pack yeGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Chokwadi iwe unotoziva akati wandei eaya mapakeji ezvekushandisa kana zvinoshandiswa. Muenzaniso ndewe GNU musimboti zvinoshandiswa, zvinova izvo zvinoshandiswa zveGNU, asi kune zvimwe. Muenzaniso weizvi ndeuyu the moreutils package iyo iwe yaunogona kuisa pane yako distro kana iwe uchida kuve nezvimwe zvakakosha UNIX maturusi, sezvo iripo kune akati wandei anoshanda masisitimu, zvakare yeApple's FreeBSD, openBSD, uye macOS.
Mukati me moreutilis iwe unowana zvinoverengeka zvinonakidza zvinoshandiswa. Uye unogona isa iyi pasuru zvakapusa uchishandisa maneja wepakeji wedistro yako (yum, zypper, APT, dnf, pacman, nezvimwewo), sezvo iri mune akawanda masisitimu esoftware uye inogamuchira zita rimwe chete mune ese iwo: "moreutils", pasina shanduko sezvazvinoitika nemamwe mapakeji kubva kune imwe distro kuenda kune imwe. Paunenge waiswa, iwe unenge uine yako yakanaka repertoire yezvishandiso zvishandiso zvemutsetse wekuraira.
Pindai moreutils yakaratidza zvishandiso zvinotevera:
tora nguva refu- Ita rairo chinyararire kunze kwekunge yatadza.
combine: sanganisa mitsara kubva kumafaira maviri uchishandisa Boolean vanoshanda kuti vaite saizvozvo.
zvakaipa- Anotsvaga mazita uye rondedzero ye errno.
ifdata- Tora ruzivo kubva kunetiweki interface pasina kuenzanisa iyo ifconfig kuburitsa.
ifne- Mhanya chirongwa kana chiyero chakajairwa chisina chinhu.
isutf8: inotarisa kana iyo faira kana yakajairwa yekuisa iri mune UTF-8 fomati.
lckdo- Zvakafanana neboka uye lckrun, kudzivirira akawanda maitiro kubva kumhanya akafanana. Inogona kutaridzika serudzi rweNice kana nohup yemabatiro. Unogona kuishandisa kudzivirira zvakapetwa mabasa ...
zvisizvo: pombi yemirairo miviri, ichidzosa iyo yekubuda nyika kutanga kana ikakundikana.
Parallel- Mhanya akawanda mabasa panguva imwe chete.
pee: inouya kubva pombi tee uye inozadzisa ichi chimwe chishandiso chekushanda nemapombi.
sponge: inotora iyo yekuisa uye inonyora kune faira.
ts: timestamp yekupinza yakajairwa.
maona: rongedza dhairekitori mune yako zvinyorwa edhita, inobatsira zvakanyanya kugadzirisa mazita emafaira arimo, nzira, nezvimwe.
VIP- Anokutendera kuti uvhure chinyorwa chemavara pakati pepombi kuti ugadzire zvirimo usati waenderera nepombi.
zrun: otomatiki anosunungura mafaira apfuura semirairo yekuraira.
Sezvauri kuona, izvo zvinoshandiswa inonakidza kwazvo zvinyorwa uye vamwe…
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » zvimwezve: Unix yekushandisa pack yeGNU / Linux